चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल आउन उडान परीक्षणको लागि जहाज काठमाडौं आयो
काठमाडौं । राष्ट्रपति सी चीनफिङको भ्रमणको तयारीका लागि चिनियाँ जहाज काठमाडौं आएको छ। बुधबार अपरान्ह पौने २ बजे चिनियाँ जहाज परीक्षण उडानका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएको हो। एयर चाइनाको बोइङ जहाज..
मन्त्री, सांसद र स्वकिय सचिवलाई ४ करोड दशैंभत्ता बाँडदै सरकार
काठमाडौं । भदौ ३१ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उपप्रधान मन्त्री, मन्त्री राज्यमन्त्री, सांसद तथा उनीहरुको स्वकिय र सहयोगीको लागि भन्दै ३ करोड ७० लाख ७६ हजार १६० रुपैयाँ भत्ता दिने..
पहिलो पटक मन्त्री र सांसद्लाई दशैं भत्ता, मासिक तलब पनि बढ्यो,
काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारले पहिलो पटक मन्त्री तथा सांसद्हरुलाई दशैं भत्ता दिने निर्णय गरेको छ यसअघि निर्वाचित प्रतिनिधि तथा मन्त्रीहरुले दशैं भत्ता नलिने व्यवस्था थियो । सरकारले..
अब छिट्टै भिखारीमुक्त नेपाल घोषणा हुने : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई छिट्टै सडक मानवमुक्त घोषणा गरिने बताएका छन् । सडकमा कोही अलपत्र परेको देखे सामाजिक संघसस्थासँग मिलेर सरकारले उद्दार गर्ने उनले बताए । उनले सडकमा..
मालपोत कार्यालयका प्रमुख मदिरा सेवन गरी कार्यालयमा आएपछि............
काठमाडौं । दिउँसै अत्यधिक मदिरा सेवन गरी मातेका मालपोत कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख भुपबहादुर बोगटीलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ । मदिराको नशामा मातेका प्रमुख बोगटीलाई दिउँसो जलेश्वर स्थित कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा..
यो वर्ष हिले दशैं, मनसुनको समयावधि लम्बियो
काठमाडौं । यसवर्ष मनसुन अन्त्य हुने साविकको औसत अवधिभन्दा तीन दिन पर पुगेको छ । नेपालको मध्य र पूर्वी भागमा दक्षिणपूर्वी जलबाष्पयुक्त हावाको प्रभाव देखिएकाले मनसुनी गतिविधि अझै बढ्ने सम्भावना रहेको..
कस्ले खोल्यो गोलाकार भित्रको हँसिया हथौडा चिह्नसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) पाटी
काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण अझै टुंगिएको छैन । दुवै पार्टी एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकता नटुंगिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युतिएको छ । निर्वाचन..
विदेशी नागरिक कालेको नेपाली बैंकबाट पाँच अर्ब लुट्ने योजना विफल
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको लुट प्रकरणमा १२ जना पक्राउ परेसँगै पाँच अर्ब रुपैयाँ लुटेर विदेश लैजाने योजना विफल भएको छ। मंगलबार लहान शाखाका ब्राञ्च म्यानेजरको पासवर्ड ह्याक गरी करोडौं..
यी हुन् कृषि विकास बैंकको ५ करोड रुपैयाँ चोरीमा पक्राउ परेका १२ व्यक्ति
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकबाट झण्डै ५ करोड रुपैयाँ चोरीमा संलग्न रहेको आरोपमा १२ जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै चोरीमा संलग्न १२ जनालाई सार्वजनिक गरेको..
आज सरकारले यसरी गर्यो जंगबहादुरको श्राद्ध, खर्च सात हजार
काठमाडौं । त्रिपुरेश्वरको कालमोचन घाटस्थित ‘जंग हिरण्य हेम नारायण मन्दिर’ हाताभित्र जंगबहादुर राणाको शालिकको आडमा ८ असोजमा दुई वटा श्राद्ध गरिए । दुबै श्राद्ध १३६ बर्ष अघि निधन भएका श्री ३..
म:मका लागि ल्याइएको राँगोले तीनजनालाई घाइते बनाएपछि प्रहरीले गोली हान्‍यो
काठमाडौं । म:म बनाउन तराईबाट ल्याइएको राँगा फुत्केर उपध्रो मच्चाएपछि प्रहरीले त्यसलाई गोली हानेर मारेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार मंगलबार बिहान चार बजे स्वयम्भू क्षेत्रबाट राँगा फुत्केको हो। मान्छेलाई..
भारतीयसँग बिहे गरेका नेपाली चेलीले भारतमा चुनाव लड्न नपाउने
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच ‘रोटी बेटीको सम्बन्ध’ भनिँदै आएको छ । दुई देशका नागरिकबीच वैवाहिक सम्बन्ध हुँदै आएको तथ्यलाई यो उक्तिले उजागर गर्दछ । हुन पनि नेपाल र भारतका नागरिकबीच..
सिआईविद्धारा बैंक अफ काठमाण्डूका तत्कालीन सीईओ अजय श्रेष्ठसहित ११ जना पक्राउ
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजय श्रेष्ठसहित ११ जना कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीले शुक्रबार उनीहरूलाई बैंकिङ्ग कसुरको मुद्धामा पक्राउ..
इरानमाथि जवाफी कारवाही गर्ने साउदी अरबको चेतावनी
रियाद । साउदी अरबले हालै तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएको आक्रमणमा इरानको हात रहेको भन्दै जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । साउदी अरबका पराराष्ट्र राज्यमन्त्री आदेल अल जुबेरले इरानको हतियारहरु भेटिएको..
चिनियाँ राष्ट्रपति २७ असोजमा नेपाल आउने, के के सम्झौता हुँदैछ ?
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ २७ असोजमा नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् । राष्ट्रपति सी भारत–चीन अनौपचारिक सम्मेलनका लागि ११ अक्टोबरमा भारत जाने बताइएको छ । उनी भारत हुँदै नेपाल..
आज राति विस्वकै अग्लो भवन बुर्ज खलिफामा नेपाली झण्डा झिलिमिली हुने
काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ)को दुबईमा रहेको संसारकै अग्लो भवन बुर्ज खलिफामा नेपाली झण्डा झिलिमिली हुने भएको छ । युएईको अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले शुक्रवार राति स्थानीय समय अनुसार ९ बजेर..
किन भने महन्थ ठाकुरले मधेश अलग ‘देश’ हुनसक्छ !
काठमाडौं । राजपा नेपालका पूर्व संयोजक महन्थ ठाकुरले अब पनि संविधान संशोधन नगरे मधेश अलग देश हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रवार जनकपुरमा एक गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता..
विभूषणमा ‘आफन्त’ परम्परा नै हाबी, प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार गर्ने विदेशीलाई समेत पदक
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसको अवसरमा विभिन्न व्यक्तिलाई विविध मानपदवी, अलंकार र पदकद्वारा विभूषित गर्ने घोषणा भएको छ । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विभूषित हुने व्यक्तिको सूचिमा सबैभन्दा पहिलो..
संविधान दिवसका अवसरमा यि पाँच व्यवसायी र बैंकरलाई पदक
काठमाडौं । संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले ५ जना व्यवसायी र बैंकहरुलाई पदक दिने भएको छ । शुक्रबार संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले निजी क्षेत्रका ५ व्यक्तिहरुलाई विभिन्न पदकबाट विभूषित गर्ने..
काठमाडौं । नेपाल सेवा निगमले आजबाट ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिन थालेको छ । निगमका अनुसार, आन्तरिक उडानमा बुधबारबाट भाडामा छुट दिन शुरु गरिएको हो ।..
काठमाडौं । आफूलाई सामाजिक अभियन्ता दावी गर्ने ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र)लाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । कुपण्डोलस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेका उनलाई प्रहरीले कार्यालय परिसरबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रश्नोत्तरका क्रममा..
एजेन्सी । इंग्ल्याण्डको अक्सफोर्ड स्थित ब्लेनहेम प्यालेसमा रहेको सुनको ट्वाइलेट चोरी भएको छ । ब्लेनहेम प्यालेसमा रहेको १८ क्यारेट सुनको ट्वाइलेट शनिबार राति चोरी भएको हो । चोरको समूहले राति प्यालेसमा..
काठमाडौं । विश्व प्रेस काउन्सिलको महासचिवमा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यबहाक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । अजरबैजानमा शुक्रवार सम्पन्न सम्मेलनबाट श्रेष्ठ महासचिवमा निर्वाचित भएका हुन् । उनी यसअघि विश्व प्रेस..
यस्ता छन् गाँजा खपत गर्ने संसारका प्रमुख दश शहर
काठमाडौं । जर्मनको कम्पनी एबीसीडीले गाँजा खपतका सम्बन्धमा एउटा अध्ययन तयार पारेको छ। कम्पनीका अनुसार अमेरिकाको न्युयोर्क शहर गाँजा खपतको मामिलामा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। शहर खपत टन १ न्यूर्योक ७७.४ २ कराँची ..
बीमा अभिकर्तालाई प्यान अनिवार्य, प्यान नम्बर बिना कमिसन नपाउने
काठमाडौं । बीमा अभिकर्तालाई स्थाई लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरिएको छ । प्यान नम्बर नलिएमा बीमा कम्पनीले बीमा अभिकर्तालाई कमिसन दिने छैनन् । बीमा अभिकर्ताको काम गर्नको लागि समितिले प्यान नम्बर..
मदिरा सेवन गर्नेलाई १० हजार जरिवाना, खायो भन्नेलाई १ हजार पुरस्कार
काठमाडौं । मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधी बनाएर जिल्लाको नलगाड नगरपालिकाले मदिरा नियन्त्रण शुरू गरेको छ । नगरपालिका भित्रका सबै वडामा अवैध रुपमा मदिरा सेवन गर्ने तथा बिक्रीवितरण गर्नेलाई १० हजार..
सन्नी लियोनी भोलि नेपाल आउँदै
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी भोलि बिहीबार नेपाल आउने भएकी छिन् । फिल्म ‘पासवर्ड’को प्रिमियरमा सहभागी हुन उनी नेपाल आउन लागेकी हुन् । ‘पासवर्ड’का निर्देशक सम्राट बस्नेतले सन्नी बिहीबार..
८१ वर्षको वृद्ध भेषमा अमेरिका जान लागेका युवक पक्राउ
काठमाडौं । ८१ वर्षको वृद्ध बनेर अमेरिका जान लागेका ३२ वर्षीय एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भारतको अहमदावाद निवासी जयस पटेलले वृद्धको भेषमा अमेरिका जाने प्रयास गरेका हुन् ।..
८५३ अर्ब डलर व्यापार गर्ने अलिबाबा समूहका ज्याक माले किन दिए राजिनामा ?
एजेन्सी । विश्वकै सर्वाधिक ठूलो इ–कमर्श कम्पनी अलिबाबा समूहका संस्थापक ज्याक माले कम्प्नीको अध्यक्षको पदबाट मंगलवार राजिनामा दिएका छन् । अमेरिका–चीन करयुद्धका कारण व्यवसाय नै संकटमा पर्न लागेको अवस्थामा संस्थापक ज्याकले..
अर्थमन्त्रीको तलब १६ हजार रुपैयाँ मात्रै, तर कसरी ?
काठमाडौं । के अर्थमन्त्रीले राज्यकोषबाट साँच्चिकै मन्त्रीबापतको सुविधा नदिई काम गरिरहेका छन् त ? अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त सूचनाले अर्थमन्त्रीले दोहोरो सुविधा नलिएको देखाउँछ । खतिवडा नेपाल राष्ट्र ब्यांकको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाशप्राप्त हुन्..
Results 1994: You are at page5of 67